အထူးတံဆိပ်များ တင်သွင်းသူများနှင့် စက်ရုံ - တရုတ် အထူးတံဆိပ်များ ထုတ်လုပ်သူများ
Aluminum Coated Art Paper Label ၁
Aluminum Coated Art Paper Label ၂
လွှဲပြောင်းခြင်းမဟုတ်သော VOID လုံခြုံရေးစတစ်ကာများ
ထုတ်ကုန်များ၏ ဖော်ပြချက်- ပျက်ပြယ်သောပစ္စည်းများကို လွှဲပြောင်းခြင်းမပြုဘဲ၊ လုံခြုံရေး ဝှက်ထားသော မက်ဆေ့ချ်/ပုံစံသည် သူ့အလိုလို ပေါ်လွင်နေသော်လည်း ဖယ်ရှားပြီးနောက် အပလီကေးရှင်းမျက်နှာပြင်တွင် အကြွင်းအကျန် မကျန်တော့ပါ။၎င်းသည် အပလီကေးရှင်းမျက်နှာပြင်ကို ညစ်ပတ်ခြင်းမရှိစေဘဲ သန့်ရှင်းစေသည်။ပုံများ-
စုစုပေါင်းလွှဲပြောင်းခြင်း VOID လုံခြုံရေးစတစ်ကာများ
ပေါင်းစပ်မှု- 25/50um Matte/Gloss ငွေရောင် VOID စတစ်ကာများ ဖော်ပြပါ ထုတ်ကုန်များ- စုစုပေါင်း လွှဲပြောင်းမှု VOID ပစ္စည်းများမှာ အကြွင်းအကျန်နည်းပါးပြီး မြင့်မားသော အကြွင်းအကျန်များကို ခွဲခြားထားသည်။လုံခြုံရေး လျှို့ဝှက်စာတို/ပုံစံသည် တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း လွှဲပြောင်းမှုအမျိုးအစားထက် ပိုမိုရှင်းလင်းစွာ ဖော်ပြသည်။အပြည့်အ၀ ဖောက်ထွင်းမြင်ရသော သယ်ဆောင်သည့်အလွှာအောက်ရှိ ကော်ကို ဖယ်ရှားပြီးနောက် အပလီကေးရှင်းမျက်နှာပြင်တွင် လုံးလုံးလျားလျား လွှဲပြောင်းပေးသည်။ဓာတ်လှေကားတံဆိပ်သည် ကော်ဖြင့် မရှိတော့ဘဲ နောက်တစ်ကြိမ် ထပ်မကပ်နိုင်တော့ပါ။ပုံများ-
ထုတ်ကုန်များ ဖော်ပြချက်- တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း လွှဲပြောင်းခြင်း VOID ပစ္စည်းများသည် အကြွင်းအကျန်နည်းခြင်းနှင့် မြင့်မားသောအကျန်များကို ခွဲခြားထားသည်။လုံခြုံရေး လျှို့ဝှက်စာတို/ပုံစံသည် ဓာတ်လှေကားအညွှန်းနှင့် အပလီကေးရှင်းမျက်နှာပြင်ကြားရှိ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း ကော်တစ်ခုဖြင့် သူ့ကိုယ်သူ ထင်ရှားစေပြီး ဖယ်ရှားခြင်းဆိုင်ရာ အထောက်အထားများကို ပြသသည်။ပုံများ-
နို့အဖြူ Static Cling PVC Vinyl Film သည် Glue အကြွင်းအကျန်မရှိသော
အမြန်အသေးစိတ်ပစ္စည်း : အဖြူရောင် PVC အမျိုးအစား : ပုံနှိပ်ဖလင် အသုံးပြုမှု : Glass wall ပေါ်တွင် တွယ်ကပ်ရန် အလှဆင်ရုပ်ရှင် သို့မဟုတ် ပုံနှိပ်ခြင်း အထူ : 80mic/100mic/120mic/150mic အဖြူရောင် PVC အကျယ် : 0.914 /1.07/1.27/1.52M ပုံနှိပ်ခြင်း : အော့ဖ်ဆက်ပုံနှိပ်ခြင်း ;flexo ပုံနှိပ်ခြင်း; Eco-solvent, UV Adhesive: ကော်မပါဘဲ, ကော်အရည်အသွေး: ပရီမီယံအသုံးပြုမှု: အားလပ်ရက်အလှဆင်;ဦးထုပ်ဆောင်းထားသော ကုန်ပစ္စည်းပုံများ
ကားတံဆိပ်များပေါ်ရှိ ဦးထုပ်အညွှန်းများ အတွက် PVC လျှပ်စစ်ဓာတ်မှန် အကာအကွယ် ထုပ်ပိုးထားသော ဖလင်ကို ရှင်းလင်းပါ။
ကုန်ပစ္စည်းဖော်ပြချက် ပစ္စည်းများ:PVC အမျိုးအစား:ပုံနှိပ်ဖလင် အသုံးပြုမှု-ဖန်သားနံရံတွင် တွယ်ကပ်ရန် အလှဆင်ရုပ်ရှင် သို့မဟုတ် ပုံနှိပ်ခြင်း အင်္ဂါရပ်: အစိုဓာတ်ထိန်းရန် မာကျောမှု: ပျော့ပျောင်းမြင်သာမှု- အထူ- 80mic/100mic/120mic/150mic Clear PVC အကျယ်: 0.914 /1.07/1.27/1.52M ပုံနှိပ်ခြင်း- အော့ဖ်ဆက်ပုံနှိပ်ခြင်း ;flexo ပုံနှိပ်ခြင်း; Eco-solvent၊ UV ထုတ်ကုန်ရုပ်ပုံများ
Die cutting တံဆိပ်စတစ်ကာများ
ပစ္စည်းများ- တစ်ပိုင်းတောက်ပသော chrome စက္ကူ၊ တိုက်ရိုက်အပူစက္ကူ၊ လွှဲပြောင်းအပူစက္ကူ၊ PET၊ PP။ထုတ်ကုန်များ၏ ဖော်ပြချက်- ပရင့်ထုတ်နိုင်သော coating/digital coating(Memjet/Inkjet)။ပုံနှိပ်ခြင်း- ဘားကုဒ်ပရင်တာများ၊ Memjet/Inkjet ပရင်တာများ။လျှောက်လွှာ- ဘားကုဒ်များ၊ အစားအသောက်တံဆိပ်များ၊ အဖျော်ယမကာတံဆိပ်များ၊ ဆေးဝါးတံဆိပ်များ၊ စိတ်ကြိုက်စတစ်ကာများ၊ အလှကုန်တံဆိပ်များ စသည်တို့။ အရွယ်အစားများ- စိတ်ကြိုက်။ပုံများ-
Self Adhesive PP Synthetic စက္ကူ
1.) မျက်နှာစက္ကူပစ္စည်း- အဖြူရောင်တောက်ပသော သို့မဟုတ် matt PP Synthetic Paper 2.) မျက်နှာစက္ကူအထူ- 50 မှ 250 micron 3.) မျက်နှာစက္ကူအပေါ်ယံပိုင်း- ကိုရိုနာကို ကုသပြီး အပေါ်ယံအလွှာကို လိမ်းပါ 4.) ဖြန့်ထုတ်သည့် ပစ္စည်း- အဖြူရောင် သို့မဟုတ် အဝါရောင်ဆီလီကွန်ထုတ်လွှတ်မှု။ စက္ကူ၊ PET ဖလင် 5.) ကော်အမျိုးအစား- ဆီကော်၊ acrylic ကော် သို့မဟုတ် ပူပြင်းသော အရည်ပျော်ကော် 6.) တွဲဖက်သုံးနိုင်သော မှင်- ရောင်ခြယ်မင် သို့မဟုတ် ဆိုးဆေးမှင်၊ စာလုံးပုံနှိပ်ခြင်း၊ အော့ဖ်ဆက်ပုံနှိပ်ခြင်း၊ ပိုးထည်မျက်နှာပြင် ပုံနှိပ်ခြင်း၊ လေဆာပုံနှိပ်ခြင်း၊ HP Indigo ပုံနှိပ်ခြင်း etc. 7.) Size : လိပ်များ သို့မဟုတ် စာရွက်များတွင် ရရှိနိုင်ပါသည်...
ရောင်စုံ Self Adhesive PVC စတစ်ကာတံဆိပ်
မျက်နှာ- အရောင် PVC။50um၊ 80um၊ 100um Adhesive- Solvent-based ကော်/ရေအခြေခံကော် Liner- 120gsm အဖြူရောင်ထုတ်စက္ကူ/140gsm အဖြူရောင်ထုတ်စက္ကူ/60gsm glassine စက္ကူ လျှောက်လွှာ- ဝတ်ဆင်ထားသော ရုပ်ရှင်များ၊ လုံခြုံသော ဖန်သားပြင်လေဆာရုပ်ရှင်များ၊ ကား/ဆိုင်ကယ်/စက်ဘီး Applique၊ ဘီယာ၊ ဝိုင်၊ အလှကုန်၊ လျှပ်စစ်နေ့စဉ်နှင့် စက်မှုတံဆိပ်များ
ရောင်စုံ PP & CPP
Facestock- ရေစိုခံ၊ အရက်ပြန်ခံ၊ ဆီခံ၊ ခြစ်ရာခံနိုင်၊ မျက်ရည်ခံနိုင်ရည်။
ဘောပင်နှင့် ဆီဘောပင်ဖြင့် ရေးသားနိုင်သည်။
ကော်- ရေအခြေခံ၊ ကြာရှည်ခိုင်ခံ့မှု။
Liner: ပါးလွှာပြီး ပုံနှိပ်ရန် ကောင်းမွန်သည်။
လျှောက်လွှာ- ကေဘယ်လ်တံဆိပ်များ၊ ဆိုင်းဘုတ်တံဆိပ်များ၊ အမှတ်အသားတံဆိပ်များ၊ သတိပေးတံဆိပ်များ၊ ပရိုမိုးရှင်းတံဆိပ်များ
အရွယ်အစားများ- စာရွက်များ သို့မဟုတ် အလိပ်များ စိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။
မဂ္ဂဇင်း သို့မဟုတ် ပိုစတာအတွက် ရေစိုခံ PE Synthetic Stone Paper Coated Art Paper
အမြန်အသေးစိတ် စက္ကူအမျိုးအစား အစားအစာထုပ်ပိုးစက္ကူ Coating Coated လိုက်ဖက်သော ပုံနှိပ်ခြင်း အော့ဖ်ဆက်ပုံနှိပ်ခြင်း အင်္ဂါရပ် ရေစိုခံအလွှာဖုံးပစ္စည်း PE Coating ဘေးထွက် Single Side Pulp ပစ္စည်း Wood Pulp ပုံစံ Virgin Pulping အမျိုးအစား စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ Pulp အမှတ်တံဆိပ် အမည် Paperjoy စိတ်ကြိုက်မှာယူမှု လက်ခံအရွယ်အစား 1100*500*500 အရောင်အဖြူ အနံ 865mm အထူ (gsm) 190gsm~330gsm Roll Dia: 1100~1200mm Core3လက်မ သို့မဟုတ် 6လက်မ အရည်အသွေးမြင့် အရည်အသွေးအဆင့် 1400ton/month ထုတ်လုပ်မှု...
ရေစိမ်ခံပြီး ကိုက်ဖြတ်နိုင်သော ကျောက်စက္ကူ ပေါင်းစပ်ထားသော စက္ကူ
အမြန်အသေးစိတ် စက္ကူအမျိုးအစား ပုံနှိပ်စက္ကူ Coating Coated Compatible Printing Offset printing Feature Waterproof, Eco-friendly, Waterproof and Resistant Coating Material PE Coating Side Double Side Pulp Material Mixed Pulp Style Virgin Pulping Type Chemical Pulp Custom Order လက်ခံ Size 787*1092mm သို့မဟုတ် 889*1194mm၊ 787*1092mm သို့မဟုတ် 889*1194mm ကုန်ပစ္စည်းအမည် ကျောက်စက္ကူ ပစ္စည်း Calcium carbonate နှင့် HDPE ပုံနှိပ်ခြင်းနည်းလမ်း Flexio၊ UV၊ offset၊ offset printing ...
PE Coated Synthetic Stone Paper Board အပူခံစက္ကူခွက် Rolls
အမြန်အသေးစိတ်အချက်များ စက္ကူအမျိုးအစား အစားအစာအဆင့်ထုပ်ပိုးမှု Coating Coated လိုက်ဖက်ညီသော ပုံနှိပ်ခြင်း အော့ဖ်ဆက်ပုံနှိပ်ခြင်း အင်္ဂါရပ် ရေစိုခံအလွှာဖုံးပစ္စည်း PE Coating ဘေးထွက် နှစ်ချက်ခြမ်းပျော့ဖတ်ပစ္စည်း ရောနှောထားသော ပျော့ဖတ်ပုံစံ အပျိုစင်ပုံစံ ဓာတုပျော့ဖတ် စိတ်ကြိုက်မှာယူမှု လက်ခံအရွယ်အစား 1200*500*500 ပုံနှိပ်အမျိုးအစား- အစားအစာတန်း flexo ပုံနှိပ်ခြင်း အရောင်4ရောင်စုံပုံနှိပ်ခြင်း မှတ်တမ်းပါသော စိတ်ကြိုက်ပုံနှိပ်ခြင်း- Yes အသုံးပြုမှု- စက္ကူခွက်ထုတ်လုပ်ခြင်းအတွက်
နိုင်ငံတကာဌာန အရောင်းမန်နေဂျာ- SW Label
ဖုန်း :၀၀၈၆ ၅၇၃ ၈၂၈၆၆၆၆၀
ဆဲလ်: 0086 15921745861
ပျော်ရွှင်ဖွယ်ရာ ခရစ်စမတ်နှင့် ပျော်ရွှင်စရာ နှစ်သစ်ဖြစ်ပါစေ။
အချက်အလက်ပေးပို့ခြင်းအတွက် ကျေးဇူးတင်ရှိပြီး တတ်နိုင်သမျှ အမြန်ဆုံး ဆက်သွယ်ပေးပါမည်။